Madaxtooyada Somaliland oo war-saxaafadeed ka soo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxtooyada Somaliland oo war-saxaafadeed ka soo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo!!
Madaxtooyada Somaliland oo war-saxaafadeed ka soo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo!!
Maamulka Somaliland ayaa maanta soo saaray war-saxaaradeed ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Dalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyagoo u hambalyeeyey sona dhaweeyay.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland oo dhinacyo badan ka hadlayey ayaa u qornaa sidatan:-
Xukuumadda Somaliland waxay soo dhaweynaysaa go’aankii ka soo baxay kulanadii is-daba joogga ahaa ee ay Mudanayaasha Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ku kala doorteen musharaxa loo dhiibayo Hoggaanka iyo talada dalka aan jaarka nahay ee Soomaaliya.
Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waanu ku hambalyeynaynaa xilkaa loo igmaday waxaanannu ALLAH uga baryeynaa inuu xilkaa iyo masuuliyaddaa ku asturo.
Jamhuuriyadda Somaliland waxay mar walba muhimadda iyo mudnaanta koowaad siinaysaa deris-wanaagga iyo nabad ku wada noolaanshaha labada shacab ee walaalaha ah.
Waxaanu soo dhaweynaynaa nabad, degenaansho iyo xal waara oo loo helo arrinta murugada leh ee ka jirta Soomaaliya.
Dhinaca kale, Jamhuuriyadda Somaliland waxa si dhab ah uga go’an in la da-dar geliyo oo la sii wado wada hadallada siyaasada Somaliland iyo Soomaaliya.
Haddaba si looga gun gaadho wada hadalada labada dal u dhexeeya, waxaanu Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya ugu baaqaynaa inuu ka leexdo jidkii qaldanaa ee uu qaaday Madaxweynihii isaga ka horreeyey ee ku suntanaa faro-gelinta iyo carqaladaynta Qadiyadda iyo Gooni isu-taagga JSL.
Madaxweyne Farmaajo waxaanu kula talinaynaa inuu muhimadda koowaad siiyo sidii u dalkiisa iyo dadkiisa ugu horseedi lahaa nabad iyo degenaansho waarta taasoo ay ku jirto danaha iyo maslaxadaha jaarnimo.
Sidoo kale, Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya waxaanu si cad ugu sheegaynaa in Jamhuuriyadda Somaliland aanay meteli karin shaqsiyaad danaystayaal ah oo Muqdisho laga cugtay.
Waa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbiweynaha Somaliland dooran, ama aan haysanin kalsoonidooda. Ummadda Somaliland waxaa matala oo kaliya, kana mas’uul ah Madaxweyne iyo M/weyne ku xigeen ku yimi doorasho xor iyo xalaal ah iyo Goleyaal Qaran oo ku yimi rabitaanka iyo Codka ummadda JSL.
Previous Post"Ciidankeena Gashaan Oo isku wareejiyay Gaariga Madaxwayne Muxamed Farmaajo Amniga Waa Suganyahay waxaa bilaabatay Karaamadii Soomaaliya Lahayd!!. Next PostMadaxweynaha cusub ee Somalia oo fariin muhiim ah hawada u mariyey shacabka dibed baxaya!!